Himalaya Dainik » कतारमा हुनेलाई खुशीको खबरः श्रमिकका लागि नयाँ न्यूनतम तलब लागू
कतारमा हुनेलाई खुशीको खबरः श्रमिकका लागि नयाँ न्यूनतम तलब लागू
43 seconds अगाडी
काठमाडौँ — कतारले आप्रवासी अदक्ष श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम तलबलाई शनिबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कतारले रोजगारदाता कम्पनीलाई तयारीका लागि ६ महिना अगाडि नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार सबै कम्पनीले अनिवार्य रुपमा न्यूनतम तलबलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । खाडीका ६ देशमध्ये कतारले मात्रै न्यूनतम तलब तोकी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो तलब कतारमा कार्यरत र नया भिसा लिई जाने सबैको हकमा लागू गरेको छ ।
कतार सरकारको मन्त्रीस्तरीय बैठकले जारी गरेको २०२० को कानुन नम्बर १७ अनुसार अदक्ष श्रमिकको न्यूनतम तलब, खाना र आवासबापत पाउने सुविधा निर्धारण गरेको हो । अब रोजगारदाताले न्यूनतम तलब एक हजार रियाल, खानाबापत ३ सय र आवासबापत ५ सय रियाल दिनुपर्नेछ । तर, खाना र आवासको सुविधा दिएमा श्रमिकलाई अनिवार्य एक हजार रियाल तलब मात्रै दिए पुग्छ ।
कतारस्थित नेपाली दूतावासले सबै श्रमिकले कतार सरकारद्वारा तय गरिएको न्यूनतम तलब पूर्ण रुपमा पाउनेमा विश्वास गरेको जनाएको छ ।
यो तलब कार्यान्वयनमा आएपछि कतार सबैभन्दा बढी न्यूनतम तलब दिने रोजगाराता मुलुक बनेको छ । नेपाल सरकारले २०१३ देखि अदक्ष श्रमिकका लागि न्यूनतम तलब ९ सय रियाल र खानाबापत तीन सय रियाल गरी १२ सय रियाल निर्धारण गरेको थियो । रोजगारदाता कम्पनीले नेपालले एकतर्फी रुपमा तलब निर्धारण गरेको भन्दै त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेका थिएनन् ।
कतारले पनि रोजगारदाता र श्रमिकबीच हुने सम्झौतालाई मात्रै आफूले कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी रहेको बताउँदै आएको थियो । कतारले दुई वर्षदेखि भने ७५० रियाल भन्दा तलको करारपत्रलाई प्रमाणीकरण गर्न छोडेको थियो ।
मन्त्रालयले कतारमा काम गर्ने सबै देशका नागरिकको लागि बिनाभेदभाव नगरी समान तलब तोकेको जनाएको छ । यसले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाई मर्यादित श्रम बजार बनाएको मन्त्रालयको दाबी छ । यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न बैंकबाट अनिवार्य तलब दिनुपर्ने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । कतारले ५ वर्ष अगाडिदेखि नै श्रमिकलाई प्रत्येक महिनाको पहिलो साताभित्र बैंकबाट अनिवार्य तलब दिनुपर्ने प्रणाली व्यवस्था गरेको थियो । त्यसभन्दा अगाडि कामदारको बैंक खाता हुने गरेको थिएन । होम कार्कीले कान्तिपुरमा समाचार लेखेका छन् ।
यी ४ राशिका लागि फलिफाप छ चैत महिना, तपाईको कुन ?
कुन राशि भएका व्यक्त्तिमा कस्तो कमजोरी हुन्छ, जान्नुहोस् !
श्रीमान उदिपसँग रोमान्टिक आँचल (फोटो फिचर)
कलेजमा साथीहरुसँग नायिका करिश्माको रमाइलो गफगाफ (भिडियो)
आज निकै राम्रो छ यी ४ राशि भएकाको भाग्य